News - Sidee loo mashiin karaa xargaha xarunta mishiinka?
Mashiinka dunta xarunta mashiinka waa mid ka mid ah codsiyada ugu muhiimsan. In geeddi-socodka farsamaynta dunta, tayada iyo waxtarka mashiinku wuxuu si toos ah u saameeyaa tayada iyo waxtarka qaybta. Hoos waxaan ku soo bandhigi doonaa qaababka loo farsameeyo dunta inta badan loo isticmaalo mashiinada dhabta ah, iyo sidoo kale xulashada qalabka makiinada miiqyada, barnaamijka NC iyo falanqaynta iyo sharaxaadda taxaddarrada. Si hawlwadeenku u doorto habka wax ku oolka ku habboon si loo hagaajiyo waxtarka xarunta makiinadda.
A. Taabasho rogrogmi kara iyo isbarbar dhig adag
Xarunta mashiinka, taabashada daloolka la taabtay waa hab wax soo saar guud, waxayna ku habboon tahay godadka dunta leh ee dhexroor yar iyo saxnaanta booska hoose. Waxay leedahay qasabado rogrogmi kara iyo qasab adag oo laba qaab ah.
Taabashadda rogrogmi kara, tubbada ayaa lagu xirayaa chuck jilicsan oo jilicsan, iyo garaacista garaacista waxaa lagu axially karaa magdhow si loo magdhabo qaladka quudinta ee ay sababtay quudinta axial ee qalabka mashiinka iyo xawaaraha wareegga dunmiiqa, iyo in la hubiyo garoonka saxda ah. Taabashada rogrogmi karta waxay leedahay astaamaha qaabdhismeedka adag, kharashka badan iyo dhaawaca fudud. Taabashada adag, inta badan iyadoo la adeegsanayo madaxa guga oo adag si loo qabto qasabada, quudinta dunmiiqa iyo xawaaraha dunmiiqa waxay la jaan qaadayaan mashiinka mashiinka, qaab dhismeedku waa iska fudud yahay, qiimaha waa iska jaban yahay, dalabkuna wuu ballaaran yahay, dalabkuna wuu sii ballaadhan yahay qiimaha qalabka.
Sanadihii la soo dhaafay, waxqabadka xarunta makiinada ayaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagtay, howsha adag ee taabashada ayaa noqotay qaabeynta aasaasiga ah ee xarunta makiinada, taas oo ah habka ugu weyn ee loo maro xargaha.
B - Xulista qasabadaha iyo ka shaqeynta godadka hoose ee dunta leh
Qasabadaha waxay u baahan yihiin in lagu xusho iyadoo loo eegayo qalabka wax soo saara. Marka loo eego qalabka kala duwan ee ay soo saartay shirkadda qalabka, waxaa jiri doona moodello tuubbo u dhigma. Marka labaad, fiiro gaar ah u yeelo farqiga u dhexeeya tuubada daloolka iyo tuubada daloolka-indhaha, iyo dhamaadka hoggaanka tuubada godka ayaa dheer. Iyo qoto dheerida farsamaynta dunta lama balan qaadi karo, haddii daloolka indha la 'lagu farsameeyo tuubbo-god.
A.Thread muuqaalada axdi qarameedka
Mashiinka dunta macnaheedu waxa weeye isticmaal dunta shiidid jarayayaal si ay u shiidaan dunta. Faa'iidada ay leedahay dunta wax lagu shiido marka loo eego qasabadaha ayaa ah inay gaari karaan qaxitaan iyo qaboojin, iyadoo si wax ku ool ah looga fogaanayo dhibaatooyinka tayada leh sida ilkaha oo lumiya iyo qalalaasaha ka jira geeddi-socodka taabashada. Isla mar ahaantaana, marka dhexroorka dunta uu weyn yahay, qasabadda waxaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo, awoodda dunmiiqa qalabka mashiinku ma buuxin karto shuruudaha wax lagu qabanayo. Marka la taabto mashiinka wax lagu qodayo, waxtarka farsamaynta ee dunta ayaa hooseysa, xoogganaanta shaqada ee shaqaaluhuna way badan tahay. Nidaamka miiqinta dunta ayaa xaqiijin kara astaamaha xoog yar iyo ka saarida qumman, wuxuuna leeyahay faa iidooyinka saxnaanta farsamaynta dunta sare iyo qiimaha qallafsanaanta dusha sare.
B. Mabda'a mawjadda miiqitaanka
a. Mashiinka dunta mashiinka wax lagu shiido
Inta lagu jiro howsha madaxa silsiladda, waxaa jira dhinacyo badan oo caajis ah. Markii hore, tuubada tuubada layliga ayaa la adeegsan jiray, taasoo dhalisay xoog xoog badan, waxtarka farsamaynta oo hooseysa, dhibaatooyinka tayada sida ilig luminta, iyo xirashada degdegga ah. Si loo hagaajiyo tayada wax-soosaarka ee dunta, qalab cusub oo masar goyn ah oo fara badan oo ilka ah ayaa loo isticmaalaa mishiinka, iyo xarunta mashiinnada jiifka ah ayaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo.
b. Barnaamijka mashiinka xoqida ee dhoobada badan
Marka loo eego cabirka dhabta ah, dhererka wax ku oolka ah ee mashiinka xoqida ee dunta badan-ilig ka weyn ayaa ka weyn dhererka dunta mashiinka daloolka dunta, iyo wadada socodka qalabka ayaa la dejiyay. Habkani wuxuu hubiyaa in ilig kasta oo wax ku ool ah oo ku yaal mashiinka xoqidda ee dunta badan leh uu ka qaybqaato goynta isla markaa, sidaasna uu ku dhammaystiro geedi socodka dunta oo dhan si dhakhso leh.